फुटबलका इतिहास म्याराडोना र पेले
Sun, Jul 12, 2020 at 8:53pm
भित्री बस्त्रको छनौटमा मानिसले गर्छन् यी ६ गल्ती #आहा खबर# देशमा अशान्ति भएपछि मालीका राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक अदालत विघटनको घोषणा #आहा खबर# कोरोना संक्रमणबाट निधन भएका पुरुष बस्ने टोल सिल #आहा खबर# ‘भारतीय च्यानलमाथिको बन्देज तत्काल खोल्न सकिँदैन’ #आहा खबर# प्रशासनिक निर्णयबाटै पनि क्लिन फिड लागू गर्न सकिन्छः मन्त्री खतिवडा #आहा खबर# जनता समाजवादीले लियो दल दर्ताको प्रमाणपत्र #आहा खबर# काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिएको आशंका #आहा खबर# आइतबार थपिए ८२ जना कोरोना संक्रमित, कुन प्रदेशमा कति ? #आहा खबर# पार्टीमा विवाद आउनु नौलो विषय होइनः प्रचण्ड #आहा खबर# यौन चाहना र लतबीच के अन्तर छ ? #आहा खबर# अमेरिकाद्वारा फ्रान्सेली उत्पादनमा कर वृद्धि गर्ने घोषणा #आहा खबर# सेलफोनबाट टिकटक हटाउन कर्मचारीलाई अनुरोध #आहा खबर# म्याग्दी पहिरोः मृतकको सङ्ख्या १७ पुग्यो, तीन घाइतेको उद्धार #आहा खबर# जनताको विश्वास कसैले चुकाउनु हुँदैनः प्रचण्ड #आहा खबर# प्रचण्डद्वारा नारायणी नदीले कटान गरेको क्षेत्रको निरीक्षण #आहा खबर#
शुक्रबार, १७ श्रावन २०७६,	आहाखबर	5.82K
एजेन्सी, १७ साउन ।
जब सबै समयको उत्कृष्ट खेलाडीको नाम आउँछ तब बिनाविवाद दुई खेलाडीको नाम आउँछ एक ब्राजिलियन पेले अनि दोस्रो अर्जेन्टिनाका डिएगो म्याराडोना । दुबै खेलाडीमा उस्तै गुण पाइन्छन् । दुई खेलाडीबीच तुलना गर्ने हो भने समानता पाउन सकिन्छ । दुबैले फिफा प्लेयर अफ द सेन्चुरीको अवार्ड पाएका छन् ।
अनेक सामाजिक तनावका बाबजुत पनि म्याराडोना बिलियन मानिसहरुका लागि आशाको प्रतीक र आइडल बने । म्याराडोना सन् १९६० को अक्टोबर ३० मा जन्मेका थिए ।
उनी गरिब वातावरणमा हुर्केका थिए । तीन वर्षको छँदा उनले जन्मदिनको कोशेलीस्वरुप बल पाएका थिए । जुन बलले नै उनको भविश्य उज्ववल बनायो ।
सानै उमेरबाट प्रतिभावान् :
आठ वर्षको उमेरमा नै उनले अर्जे्न्टिनाको जुनियर टिममा आफ्नो प्रतिभा देखाउन पाए । जब उनको प्रतिभा प्रशिक्षकले देखे प्रशिक्षकले नपत्याएर उनको चिनारीपत्र मागेका थिए जबकि म्याराडोनाको उमेर आठ वर्षको थियो ।
म्याराडोनाले साँचो बोलेको पत्ता लागेपछि प्रशिक्षकबाट उनले सीप सुधारको लागि अनुमति प्राप्त गरे । सिनियर टिमको लागि खेल्नुभन्दा पहिले नै उनले स्किल सिकिसकेका थिए । जब अजेन्र्टिनी जुनियर टिम खेल्दा उनी हाफ टाइममा अनेक स्किल देखाउँथे ।
अफिसियल डेब्यू :
१५ वर्षको छँदा उनले अर्जे्न्टिनी जुनियरको लागि अफिसियल डेब्यू गरे । उनले डेब्यू गर्दा सबैभन्दा युवा खेलाडी थिए । त्यसको केही महिनापछि उनले हङ्गेरीविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा अर्जे्न्टिनाको राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरे । जुन खेल उनले सन् १९७७ मा खेलेका थिए । राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षक सेजर मेनोट्टीले उनलाई विश्वकप खेल्नको लागि अवसर दिए ।
म्याराडोनाले अर्जे्न्टिनी जुनियरमा ५ वर्ष खेले । ५ वर्षको दौरानमा उनले १६६ खेलमा ११६ गोल गरे । जब जुनियर टिमबाट सिनियर टिममा जाने बेला आयो तब उनी दोधारमा परे । रिभर प्लेटले धेरै पैसा दिएपनि उनी बोका जुनियरमा गए । जुन टिमलाई उनी बच्चैदेखि समर्थन गर्थे । उनले बोका जुनियरमा लिग टाइटल जितेर आफ्नो सपना साकार पारे ।
४० खेलमा २८ गोल :
म्याराडोनाले बोका जुनियरमा एक सिजन मात्र खेले । उनले बोका जुनियरको लागि खेलेको ४० खेलमा २८ गोल गरे । बोका जुनियरमा उनले प्रिमियर डिजिभन टाइटल जिते । सिजनपछि भने उनी विश्वकप खेल्न गए । विश्वकपमा उनले ब्राजिलीयन खेलाडीलाई किक हानेकोले रातो कार्ड पाए । अर्जे्न्टिनाले सेमिफाइनसम्म पनि पुग्न सकेन ।
त्यसपछि म्याराडोना सन् १९८३ को जुनमा ७.३ मिलियन डलरमा बार्सिलोनामा अनुबन्धन भए । उनी बार्सिलोनाका पहिलो खेलाडी हुन् जसलाई रियल मड्रिडका खेलाडीले उठेर सम्मान दिएका थिए । जति म्याराडोनाबाट मानिसहरुले आशा गरेका थिए उनले ला लिगामा त्यति प्रभाव पार्न सकेनन् । उनको सुरुवातमानै खटमा चोट लागेको थियो । त्यसपछि उनी कोकिनको लतमा फसे ।
सन् १९८४ मा म्याराडोना नेपोलीमा अनुबन्धन भए । उनी नेपोलीमा १३ मिलियन अमेरिकी डलरमा आएका थिए । उनी आएपछि स्थानीय पत्रिकाले सहरमा स्कुल, बस, घर, जागिर केही नचाहिने तर म्याराडोना चाहिने भन्दै आलोचना गरेका थिए । जब म्याराडोनाले ७५ हजार नेपोलीका समर्थकहरु देखे तब उनले उनीहरुका लागि केही गर्छु भनी सोचें । उनले पहिलो सिरी ए सिजनमा आफ्नो क्लबलाई तेस्रो स्थानमा राख्न सफल भए ।
माहिर म्याराडोना :
सन् १९८६ को विश्वकपमा कुनै शंका थिएनकि त्यहाँ उत्कृष्ट खेलाडी को छ भनेर । यो समय भने उनलाई कुनै प्रकारको छेकबार भएन । उनलाई कसैले रोक्न सकेन । उनी वायुपंखी घोडाजस्तो तेज भाग्थे । बललाई नियन्त्रण गर्नसक्ने क्षमता, दृष्टि, पासिङ र ड्रिबिलिङ सीपमा उनी माहिर थिए ।
पुरानो प्रतिद्वन्द्वी उरुग्वेलाई पराजित गरेपछि अर्जेन्टिना इङ्ल्यान्डसँग क्वार्टरफाइनलमा भिड्दै थियो । खेल सुरु भएको ४ मिनेटमा नै उनले आफ्नो राष्ट्रको लागि पहिलो गोल गरे । फाइनल खेल जर्मनीको बिरुद्ध थियो । जर्मनीले उनलाई सुस्त बनाउन खोजेको थियो तर इतिहास लेख्न खोज्ने उनी किन डराउँथे र ? आखिर उनले आफ्नो इतिहास लेखेरै छाडे । उनले नै अर्जेन्टिनालाई दोस्रो विश्वकप जिताएका थिए । उनले प्लेयर अफ द टुर्नामेन्टको अवार्ड पनि पाएका थिए ।
कोकिनको दुर्व्यसन :
विश्वकपपछि उनी नेपोलीमा फर्किए । उनले नेपोलीलाई सिरी ए टाइटल जिताए । नेपोलीले पहिलो चोटि सिरी ए टाइटल जितेको थियो । त्यसपछिको २ सिजनमा रनरअप भएको नेपोली भयो । सन् १९९० मा भने नेपोलीले स्कुडेट्टो प्राप्त गरेको थियो । मैदानमा सफलता प्राप्त गरेपनि म्याराडोनाको व्यक्तिगत जीवन भने झनपछि झन् कमजोर हुँदै गइरहेको थियो । ८० को दशकको बीचबाट सुरु भएको उनको कोकिनको दुर्व्यसनले उनलाई नराम्रोसँग फसाइरहेको थियो ।
कोकिनले नै उनको खेललाई अवरोध पुर्याइरहेको थियो । तर उनले अर्जेन्टिनालाई अर्को विश्वकपको फाइनलमा भने पुर्याए । खेल इटालीमा भइरहेको थियो । इटाली म्याराडोनाको दोस्रो घर थियो । जब अर्जे्न्टिना इटालीविरुद्ध खेल्न थाल्यो तब धेरै नेपोलीका समर्थकहरुले आफ्ना आइडललाई सलाम गरे । अधिकाँशले त कसलाई समर्थन गर्ने भनेर निर्णय पनि लिन सकिरहेका थिएनन् ।
मैदानमा राम्रो भएपनि उनको जीवन नेपोलमा भने त्यति ठिक थिएन । पत्रिकाहरुले उनी, उनकी श्रीमती र उनीहरुको बच्चाको बारेमा लेख्न थाले । उनीहरुको बच्चा जन्मेको बारेमा जनतालाई केही पनि थाहा थिएन । यसैगरी उनी ड्रग्स टेस्टमा पनि सक्षम हुन सकेनन् । जसकारणले सन् १९९१ मा उनले नेपोली छाडे । पछि उनी स्पेनिश क्लब सेभियामा आए । सेभियाका लागि उनले जम्मा २६ खेल मात्र खेले । उनले सेभिया क्लबमा रहेर नेपोलीमा जस्तो प्रगति गर्न सकेनन् । भर्खर मात्र सेभियामा आएका म्याराडोनाले सन् १९९३ मा नै सेभिया छाडे । त्यसपछि उनी आफ्नै देशको क्लबमा फर्किए । त्यहाँ पनि उनी धेरै खेलेनन् ।
व्यावसायिक खेलबाट सन्यास :
सन् १९९४ को विश्वकपमा उनले दुई खेल खेले । सबैभन्दा खुशीको कुरा उनी ड्रग्सटेस्टमा सकारात्मक नतिजा आएको थियो । उनले राष्ट्रिय टिमको लागि ९१ खेलमा ३४ गोल गरेका थिए । सन् १९९५ मा उनी बोका जुनियरमा आए । त्यहाँ २ वर्ष खेले । त्यसपछि उनले व्यावसायिक खेलबाट सन्यास लिए । उनको विवादित व्यक्तिगत जीवनलाई हेरेर उनले फुटबलमा परेको असरलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । उनले गर्दा नै अर्जे्न्टिनाले दोस्रो पटक विश्वकप जित्न सफल भयो । त्यसपछि कसैले पनि अर्जे्न्टिनालाई विश्वकपको उपाधि दिलाउन सकेका छैनन् ।
अहिले पछिल्लो समय मेस्सीलाई म्याराडोनासँग दाज्ने गरिन्छ । मेस्सीले भने दुईपटक विश्वकप खेलेर देशका लागि उपाधि भने दिलाउन सकेनन् । अब मेस्सी सन् २०२२ मा कतारमा हुने विश्वकपमा आफ्नो देशलाई तेस्रो विश्वकपको उपाधि दिलाउने योजनामा छन् ।
पेले : 'श्रीपेच बिनाका सम्राट'
विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको सुरुवातका पाँच वटै संस्करणमा भाग लिएको ब्राजिलका लागि नतिजा सहज हुन सकिरहेको थिएन ।
फुटबल भनेपछि हुरुक्कै हुने ब्राजिलले सन् १९५० को चौथौं विश्वकको आयोजना गर्‍यो । उसले प्रतियोगितालाई भव्य बनाउन २ लाख अट्ने रंगशालासमेत निर्माण गर्‍यो । त्यहीबेला ब्राजिल उपाधि जित्न चाहन्थ्यो। तर निर्णायक खेलमा उरुग्वेसँग पराजित भएपछि ब्राजिलको उपाधि जित्ने सपना पूरा हुन सकेन । सन् १९५४ मा स्विट्जरल्यान्डमा आयोजना भएको पाँचौ संस्करणमा त ब्राजिल क्वार्टरफाइनलबाटै आउट हुनुपर्‍यो ।
राष्ट्रिय टिममा डेब्यु :
सन् १९५७ जुल ७ मा अर्जेन्टिना विरुद्धको खेलमा पेले उपनाम गरेका खेलाडीले १६ वर्षको उमेरमा राष्ट्रिय टिममा डेब्यु गरे । डेब्यु खेलमै गोल गरेपछि पेलेले ब्राजिलियन फुटबलमा आशाको सञ्चार गराइदिए । डेब्यु खेलमै गोल गरेपछि पेलेले मात्र होइन ब्राजिलले पनि पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन । ब्राजिललाई विश्व च्याम्पियन बनाउँदै तहल्का मच्चाएका पेले पछि शताब्दीका महान् फुटबलरको रुपमा पुकारिए ।
पेलेको वास्तविक नाम एड्सन अरान्ते दो नासिमेन्तो हो। उनको जन्म ब्राजिलको त्रेश कोरसोंइसमा अक्टुबर २३, १९४० मा भएको थियो । गरिब परिवारमा जन्मिएका पेलेको बाल्यकाल अभावै अभावमा बित्यो । उनी बाल्यकालमा नांगो खुट्टाले झुम्राको बल खेल्थे । सडकबाटै उनले फुटबलको कला सिकेका थिए। १६ वर्षमै उनी ब्राजिलको राष्ट्रिय टोलीमा परे र १७ वर्षको उमेरमा विश्वकप खेल्ने विश्वकै कान्छो खेलाडी पनि बने ।
प्रेरणादायी प्रसंग :
सन् १९५८ को विश्वकपपछि त उनी एड्सन अरान्ते दो नासिमेन्तो रहेनन्, पेलेबाटै चिनिए ।
ब्राजिलियन (पोर्चुगिज) भाषामा नांगो खुट्टाले खेल्नुलाई पेलेदास भनिन्छ । उनको बचपन त्यसैगरी खेलेर बितेको थियो । तर, त्यसपछि भने पेलेको सम्बोधनमा कुनै नाम मात्र रहेन, आदर, माया र स्नेहसमेत गाँसिएर आयो । यो नाममा ती महान् खेलाडीको दुःख, कष्ट र दरिद्रताको कथा भरिएको छ । अनि छ, उनको संकल्प र निरन्तर साधनाको प्रेरणादायी प्रसंग।
फुटबल, ब्राजिल र पेले एकअर्काका पर्यायवाची हुन् । ब्राजिल र पेलेबेगर आधुनिक फुटबलको चर्चा असम्भव छ । विश्वकपका प्रत्येक संस्करणमा खेल्न सक्षम हुँदै आइरहेको एक मात्र देश ब्राजिलले पेलेको उदय हुनुअघिसम्म एकपटक पनि विश्वकप उपाधि जितेको थिएन ।
ब्राजिल पहिलोपटक विश्व च्याम्पियन :
सन् १९५८ को विश्वकपमा पेलेलाई खेलाइएपछि ब्राजिल पहिलोपटक विश्व च्याम्पियन बन्यो । यो विश्वकपमा आफ्नो अद्भुत खेल देखाउँदै पेलेले ६ गोल गरे । उनले फ्रान्स विरुद्धको सेमिमफाइनलमा ह्याट्रिक गरेपछि ब्राजिल ५–२ को जित निकाल्दै फाइनलमा प्रवेश गरेको थियो । फाइनलमा पनि पेलले उत्कृष्ट खेल पस्के। स्विडेनविरुद्ध फाइनलमा पेलेले २ गोल गरेका थिए। उक्त खेलमा ब्राजिल ५–२ ले विजयी हुँदै पहिलो पटक विश्व च्याम्पियन बन्न सफल भयो। यही विश्वकपदेखि उनी विश्व फुटबलमा चर्चित बन्दै गए र कालान्तरमा फुटबलका जादुगर कहलिए।
सन् १९६२ मा चिलीमा आयोजना भएको सातौं संस्करणको विश्वकपमा पनि पेलेको फर्म उस्तै थियो । उनले समूह चरणमा मेक्सिकोविरुद्ध पहिलो खेलमा गोल गरे । अन्य खेलमा भने गोल गर्न सकेनन् । तर पनि उनको टिममा प्रभाव उस्तै थियो । फाइनलमा ब्राजिलले चेकोस्लोभाकियालाई ३–१ गोलले पराजित गर्दै लगातार दोस्रो पटक उपाधि जितेको थियो । १९६२ पछि कुनै पनि देशले लगातार दोस्रो पटक उपाधि जित्न सकेका छैनन् ।
सन् १९६६ मा इंग्ल्यान्डमा आयोजना भएको विश्वकपमा भने पेले र ब्राजिलियन टिमको प्रदर्शन राम्रो हुन सकेन । ब्राजिल समूह चरणबाटै बाहिरिएको थियो । यद्यपि पेले बुल्गेरियाविरुद्ध भने गोल गर्न सफल भए ।
सन् १९६६ मा बिर्सनलायक प्रदर्शन गरेको ब्राजिल सन् १९७० को विश्वकपलाई यादगार बनाउन चाहन्थ्यो । भयो पनि त्यस्तै । मेक्सिकोमा आयोजना भएको विश्वकपको पहिलो खेलमा ब्राजिलले चेकोस्लोभाकियालाई ४–१ गोलले हराउँदै शानदार सुरुवात गर्‍यो । पेलेले उक्त खेलमा गोल गर्न सफल भए। समूह विजेता बनेको ब्राजिलले क्वार्टरफाइनलमा पेरुलाई तथा सेमिफाइनलमा उरुग्वेलाई पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनायो । फाइनलमा इटालीलाई ४–१ गोलले हराउँदै ब्राजिल तेस्रो पटक उपाधि जित्न सफल भयो। फाइनलमा पेलेले सुरुवाती गोल गरेर ब्राजिललाई अग्रता दिलाएका थिए । सो विश्वकपमा पेलेले ४ गोल गरे ।
आजसम्मकै एक मात्र खेलाडी पेले :
सन् १९५८, १९६२ र १९७० तीन पटकमा विश्व च्याम्पियन बन्ने टोलीमा सहभागी भएका आजसम्मकै एक मात्र खेलाडी पेले दुईपटक विश्वकपका सर्वश्रेष्ठ खेलाडी घोषित भएका थिए। विश्पकपमा खेलेका १४ खेलमा पेलेको खुट्टाबाट १२ गोल निस्किएको थियो ।
आफ्नो २२ वर्ष लामो सक्रिय व्यावसायिक फुटबल जीवनमा उनले कुल १ हजार ३ सय ६३ वटा स्पर्धामा १ हजार २ सय ८१ गोल गरे। एक हजारभन्दा बढी गोल गर्ने एक मात्र खेलाडी मानिएका पेलेले आजीवन ब्राजिलियन क्लब सान्तोसकै लागि मात्र खेले । उनले ब्राजिलको जर्सी लगाएर खेलेका ९१ खेलमा ७७ गोल विपक्षी राष्ट्रको गोलपोस्टमा छिराएका छन् ।
पेलेको संन्यासपछि ब्राजिलले चौथोपटक विश्वकप विजेता बन्न २४ वर्ष कुर्नुपर्‍यो, सन् १९९४ को विश्वकपसम्म ।
पेलेको यति लोकप्रिय थिए कि उनलाई भेट्दा बेलायतकी महारानी एलिजाबेथले आफ्नो मर्यादाक्रम नै भुलेकी थिइन। इरानका तत्कालीन शाह मोहम्मद रेजा पहलवीले उनलाई भेट्न मात्र पनि तेहरान अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३ घन्टाभन्दा बढी समय प्रतीक्षा गरेका थिए।
'मानिसहरू भन्छन्, पेलेको कुनै धर्म, कुनै राष्ट्रियता वा कुनै वर्ण छैन,' पेलेले एकपटक आफ्नै बारेमा भनेका थिए, 'मलाई सर्वत्र स्वीकार गरिएको छ।'
स्पेनिस ला लिगा: तनावपूर्ण खेलमा बार्सिलोनाकाे संघर्षपूर्ण जीत
टोरिनोविरुद्ध सानदार जितसंगै उपधिकाे नजिक युभेन्ट्स
युभेन्टका लागि रोनाल्डोले फ्रि–किक गोल गर्दै बनाए नयाँ कीर्तिमान
ला लिगाको उपाधि नजिक रियल मड्रिड
कोरोना कहरबीच इंग्ल्यान्ड प्रस्थान गर्दै पाकिस्तान क्रिकेट टिम
अन्तिमको गोलले बार्सिलोनालाई दियो धक्का, मेस्सीकाे ‘माइलस्टोन’ काे सपना अझै पुरा भएन
इंग्लिस प्रिमियर लिग: एन्थोनीकाे ह्याट्रिकमा म्यानचेस्टर युनाइटेड विजयी
पाकिस्तानका १० क्रिकेटरमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
रोनाल्डो र डिबालाको गोलमा युभेन्टस विजयी
नेइमारले आफ्नो पूर्व क्लब बार्सिलोनालाई ६७ लाख युरो तिर्नु पर्ने
सान्जेको ह्याट्रिकका साथमा डर्टमुन्डले निकाल्याे सानदार जित
जर्मन बुन्डेसलिगामा बार्यन शीर्षमै, यस्तो छ ५ खेलको नतिजा
इंग्लिस क्लब चेल्सीका युवा स्टार कलुम हड्सन ओडोई पक्राउ
प्रिमियर लिगले सम्झौता सकिएका खेलाडीको सम्झौता थप्ने
लकडाउनमा गाडी चलाउदा अभिनेत्रीकाे दुर्घटना, अवस्था गम्भीर
अब रहेनन् रियल र बार्सिलोनाका पूर्वप्रशिक्षक एन्टिक
नेपाल र इङल्याण्डबीच हुने भनिएको मैत्रीपूर्ण फुटबल स्थगित
युरोकप स्थगित गर्न इटालीको माग
भारतमा सबै क्रिकेट प्रतियोगिता स्थगीत
कोरोना भाइरसको सन्त्रासका कारण स्थगित भयो आईपीएल
आहा रारा गोल्डकपकाे फाइनलमा पुलिस
बाहरियो च्याम्पियन्स लिगबाट टोटेनहम
महिला टि ट्वान्टी विश्वकप फाइनलमा आज भारत र अष्ट्रलियाबीच प्रतिस्प्रधा हुने
‘नेपालको प्रर्दशनबारे गम्भीर समिक्षा हुन्छ’ – क्यान
वेस्ट इन्डिजका पोलार्डकाे कीर्तिमान : पाँच सय टी–२० खेल्ने पहिलो खेलाडी
पेरिस फेसन विकमा दीपिका नजानुको कारण यस्तो छ
थाइल्यान्डलाई ९ विकेटले पराजित गर्दै नेपालको पहिलो जित
आयोजक थाइल्याण्डद्वारा नेपाललाई ६७ रनको सामान्य लक्ष्य
थाइल्यान्डलाई जित्नै पर्ने दबाबमा नेपाल
टी -२० वरीयतामा नेपाल ३ स्थान तल झर्‍याे
पुवुदुको आगमनले भैरहवा ग्लाडिएटर्स उत्साहित
प्रशासनिक निर्णयबाटै पनि क्लिन फिड लागू गर्न सकिन्छः मन्त्री खतिवडा